KFX, endrika vaovao Amazon izay hamoaka resabe | Ireo mpamaky rehetra
KFX, endrika vaovao Amazon izay hamoaka resabe
Joaquin Garcia | | Amazon Kindle, eBooks, Software
Omaly dia fantatsika ny fahatongavan'i Bookerly farany teo amin'ny Kindle. Ary toa tsy irery ity loharanom-baovao Amazon ity. Hatramin'ny nanolorana azy sy nandefasana azy Amazon dia nampiasa endrika ebook vaovao ho an'ny fivarotam-boky, endrika antsoina hoe KFX.. Ity format vaovao ity dia tsy azon'ny mpampiasa alalana, izany hoe tsy afaka mamorona ebook amin'ny endrika KFX isika ary mampakatra azy ireo, saingy safidy iray izay ataon'i Amazon kely ao anatiny.
Ny fampiharana ny endrika KFX dia zava-dehibe ho an'i Amazon satria endrika mihidy izay tsy azon'ny mpamaky fampiharana sy ny fampiharana alalana ary manakana ny ebook tsy ho very drm. Mazava ho azy, ny rindranasa KIndle sy ny rindranasa dia mahafantatra io endrika vaovao io, noho izany ny fandraisana an'io endrika vaovao io dia hahatonga an'i KIndle ho hany eReader mamaky ireo ebook novidianay.
1 Manana teboka tsara ve ny KFX?
2 Ahoana no ahafantarako raha ny ebook novidiako dia amin'ny endrika KFX?
Manana teboka tsara ve ny KFX?
Ny marina dia lavitra ireo fameperana ireo, KFX dia manana ny hatsarany, tsy ny fampidirana an'i Bookerly sy ny fikirakirany ihany koa fa ny rafitra fizarana syllable sy ligature vaovao malaza izay hahatonga ny eReader hitantana tsara kokoa ireo pejy rehefa lehibe kokoa izy. Na dia toa adaladala aza izany dia zava-dehibe ho an'ireo izay mijaly amin'ny dislexia sy amin'ny ankapobeny mba tsy hanelingelina ny maso. Fandrosoana lehibe fa tsy azo zaraina amin'izao fotoana izao.
Ahoana no ahafantarako raha ny ebook novidiako dia amin'ny endrika KFX?
Amin'izao fotoana izao ny tranokala Amazon dia tsy manondro ny endrika marina misy ilay ebook, na izany aza, misy famantarana kely izay afaka milaza amintsika raha ao amin'ity endrika ity na tsia. Raha mandeha amin'ny famaritana ny ebook, izay misy ny haben'ny rakitra, ny fiteny sns ... Hiseho "Font Font Function" izy io na koa hoe "Fandefasana endri-tsoratra mandroso" raha hita ao amin'ity takelaka ity ilay teny hoe afaka na navadika. ho KFX ny endrika, raha tsy alefa izy dia ho hafa ny endrika.
Na dia toa voafetra be aza ny endrika KFX ary hiteraka resabe avy amin'ny mpampiasa sy ny mpanjifa izany dia heveriko fa ho fotoana kely sisa tazonina ity satria azo antoka fa hisy hanana hevitra lehibe ny fanapahana azy na zavatra hafa. toy izany mba ho Tantano amin'ny programa hafa toa ny Caliber, fa mandritra izany fotoana izany dia mila mitandrina ianao rehefa mividy zavatra amin'ny Amazon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » Amazon Kindle » KFX, endrika vaovao Amazon izay hamoaka resabe
Hugues dia hoy izy:
Ny fanontaniana dia ny hahafantarana raha mbola afaka mamaky ny antontan-taratasiny ny mpamaky ahy miaraka amin'ny endrika KFX?
Mamaly an'i Hugues
fremen1430 dia hoy izy:
Raha ny marina, rehefa mividy boky amin'ny Amazon aho dia tsy mijery ny endrika ananany. Izay mividy amin'ny amazona, mividy mandrehitra. Fantatsika rehetra izany, ary tsy mety ho an'ny eReaders hafa.
Etsy ankilany, koma aotra, handray ny Caliber na programa hafa hanovana ny endrika.
Valiny tamin'i Fremen1430
Maria jose martinez dia hoy izy:
Manantena aho fa izany. Tezitra aho fa mividy avy any Amazon ary tsy afaka mizara ilay boky amin'ny vadiko izay manana Kindle ihany koa ary tsy maintsy mifanakalo ara-batana ilay boky izahay mba hamakiana ireo boky izay ividiananay ny iray na ny hafa.
Fantatro fa namaha azy ireo tamin'ny maodely farany indrindra, "fianakaviana" sns, fa isika izay tsy manana maodely farany, mila mampitaha ebook vaovao ve isika?
Valiny tamin'i Maria Jose Martinez
Tsy fantatrao ve izay hovakiana? Manolotra boky 6 i Obama mandritra ny fahavaratra